Dagaalka Guriceel oo saameyn ku yeelan kara Ciidanka Danab | KEYDMEDIA ONLINE
Danab waxa ay si joogta ah u fuliyaan weeraro ka dhan ah Kooxda Al-Shabaab, waana kumaandooskii ugu horraysay ee Soomaaliya ay yeelato tan iyo markii uu burburay Kacaankii uu hoggaaminayay M. S. Barre, sannadkii 1991.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay baahisay VOA, Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay ka fiirsaneyso Ciidanka ay Soomaaliya u tababarto ee Danab, kadib markii ay soo baxeen warar xaqiijinaya in ay qeyb ka qaateen dagaalka ka dhanka ah ASWJ, ee ka socda Guriceel.
Sida ay hore u baahisay Keydmedia Online, dagaalkaan galay maalintiisii 4-aad, waxaa ku geeriyooday Allaha u naxariistee Gaashaanle Cabdiladiif Axmed Culusow [Feyfle] Taliyihii Ururka 6-aad, Guutada 16-aad ee Ciidanka Kumaandooska Xoogga Dalka ee Danab.
War-baahinta aan warkaan ka soo xigannay, waxa ay sheegtay in Sarkaal ka tirsan safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya, uu sheegey in ay Xukuumadda Washington, ka war qabto sheekooyinka la xariira in ciidamada Danab ay ka qeyb qaateen dagaalka Guriceel.
Sidoo kale, Sarkaalka ayaa sheegay in Mareykanku uu dib uga fiirsan doono taageerada uu siiyo Ciidanka Kumaandooska Xoogga Dalka ee Danab, iyadoo la hubinayo in garab istaagga USA, ee ciidankaan uusan ka weecan jahadii saxda ahayd ee logu talagalay.
Dhanka kale, KON, oo arrinkaan ku sameysay baaritaanno dheeraad ah, ayay Saraakiil ka tirsan Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya u xaqiijiyeen in maalmahan warka la xariira arrinkaan uu si weyn ugu xoogganaa gudaha Safaaradda.
Ciidanka Danab waxaa lagu aasaasay garoonka diyaaradaha ee Balidoogle, oo ku yaalla degmada Walaweyn ee Shabeellaha hoose. Tababarka cutubkii ugu horeeyay ee Danab ayaana bilowday bishii Oktoobar 2013, iyadoo lagu daahfuray 150 askari.
Tirada guud ee Ciidanka Kumaandooska Xoogga Dalka ee Danab, ayaa lagu sheegaa ku dhawaad 1000 askari, waxayna toos u hoos tagaan Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, inkastoo ay hubkooda iyo mushaarkooda bixiso dowladda Mareykanka.
Danab waxa ay si joogta ah u fuliyaan weeraro ka dhan ah Kooxda Al-Shabaab, waana kumaandooskii ugu horraysay ee Soomaaliya ay yeelato tan iyo markii uu burburtay Kacaankii uu hoggaaminayay M. S. Barre, sannadkii 1991.
Waxaa maalintii 4-aad galay dagaalka ka holcaya magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, kaas oo u dhaxeeya Ciidanka Qalabka Sida ee Soomaaliya iyo Kooxda hubeysan ee Ahlu-sunna Waljamaaca, oo 1-dii October 2021, la wareegtay gacan ku heynta xarunta ganacsiga gobolka.